Mwari Achaitei​—Mwari Achatibatsira Sei?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Mwari Achaitei Neuipi?
Bhaibheri rinotiudza zvakajeka kuti Jehovha neMwanakomana wake Jesu Kristu vachaitei nekutambura kwakakonzerwa naSatani Dhiyabhorosi. Rinoti: “Nokuda kwaizvozvi Mwanakomana waMwari [Jesu] akaratidzwa pachena, kuti aputse mabasa aDhiyabhorosi.” (1 Johani 3:8) Nyika ine makaro, ruvengo uye uipi, ichaputswa. Jesu akavimbisa kuti “mutongi wenyika ino” Satani Dhiyabhorosi, “achadzingwa.” (Johani 12:31) Satani paachange asisipo, pachava nenyika itsva yakarurama ine rugare.—2 Petro 3:13.
Zvakadini nevaya vanozvikudza vasingadi kuchinja, uye vanoramba vachiomerera pakuita zvakaipa? Funga nezvevimbiso iyi yakajeka: “Vakarurama [chete] ndivo vachagara panyika, uye vasina chavanopomerwa ndivo vachasara vari pairi. Asi vakaipa vachaparadzwa panyika; uye vanyengeri, vachabviswa pairi.” (Zvirevo 2:21, 22) Vanhu vakaipa vachange vasisipo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvishoma nezvishoma, vanhu vanoteerera vachasunungurwa pachivi chakabva kuna Adhamu.—VaRoma 6:17, 18; 8:21.
Mwari achabvisa sei uipi zvachose munyika itsva iyoyo? Haasi kuzotorera vanhu chipo chokuzvisarudzira, oita kuti vave semarobhoti. Asi achadzidzisa vanhu vanoteerera nzira dzake, achivabatsira kusiya mafungiro nemaitiro akaipa.
Mwari achabvisa zvose zvinokonzera kutambura
Mwari achaitei nematambudziko asingafanoonekwi? Akavimbisa kuti hurumende yake yeUmambo ichange yava kutonga nyika munguva pfupi iri kuuya. Mambo akagadzwa weUmambo ihwohwo ndiJesu Kristu, uyo ane simba rokurapa vanorwara. (Mateu 14:14) Jesu anewo simba rokudzikamisa masimba ezvinhu zvakasikwa. (Mako 4:35-41) Saka matambudziko anokonzerwa ne“nguva nezviitiko zvisingafanoonekwi” achange abviswa. (Muparidzi 9:11) Pakutonga kwaKristu, vanhu vachange vasisina kana dambudziko.—Zvirevo 1:33.
Zvakadini nemamiriyoni evanhu vasina mhosva vakafa zvinosiririsa? Nguva pfupi asati amutsa shamwari yake Razaro kubva murufu, Jesu akati: “Ndini kumuka noupenyu.” (Johani 11:25) Zvechokwadi Jesu ane simba rokumutsa vakafa!
Kana uchida kurarama munyika iyo vanhu vakanaka vachange vasisawirwi nezvakaipa, wadii kudzidza Bhaibheri kuti uzive zvakawanda nezvaMwari wechokwadi uye chinangwa chake? Zvapupu zvaJehovha zvekwaunogara zvichafara kukubatsira kuti uwane ruzivo irworwo. Tinokukurudzira neushamwari kuti utaure navo, kana kuti unyorere vabudisi vemagazini ino.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Achaitei Neuipi?